Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Xumaan mise Wacan? Liiska kee ayaa hadda soo degi doona tafaariiqleyaasha?
Wax badan ayaa laga qoray dalabka fasaxa rikoodhka ee sanadkan. Creo Advisors cilmi baaris lahaanshaha ayaa iftiimisay isbeddellada muhiimka ah kuwaas oo ka sooci doona tafaariiqleyda aadka u faraxsan iyo kuwa niyad jabsan xilligan fasaxa. Iyadoo go'aamo badan ay xiran yihiin, fulinta 37ka maalmood ee ugu dambeeya ka hor fasaxa ayaa ciyaari doona door ka weyn sidii caadiga ahayd sababtoo ah nidaamka wax iibsiga ee macaamiisha iyo caqabadaha silsilada saadka.
Waxyaabaha muhiimka ah ee laga qaadanayo cilmi-baarista macaamiisha waxaa ka mid ah:
• Macaamiisha hore uma soo jiidan wax iibsiga fasaxa. Dhab ahaantii, dukaamaystayaashu waxay soo sheegaan inay 7% ka dambeeyaan heerka wax-is-weydaarsiga sannadkii hore illaa horraantii Noofambar
• Alaab-la'aanta suurtagalka ah waxay saameyn doontaa hab-dhaqanka horseedaya beddelka in ka badan $60 bilyan oo ay ku kharash-gareeyaan tafaariiqda xilliga fasaxa.
• Iyadoo in ka badan 85% macaamiishu ay qorsheynayaan inay dukaan u aadaan wax soo iibsiga, waxay filayaan in waayo-aragnimadu ay ku qiimeyn doonto 4.5 10kiiba.
• Wax ka qabashada baahida aan isbarbardhigga ahayn, caqabado badan, iyo rajooyin hoose waxay u baahan doontaa heerka xiga ee karti iyo fulin. Si kastaba ha ahaatee, abaal-marinaha ayaa muhiim u ah tafaariiqlayaasha guuleysta
Dalabka Fasaxa iyo wakhtiga
Dhab ahaantii dhammaan calaamadaha dalabka ee suuqa ayaa tilmaamaya fasax 'hal mar jiilkii'. Cilmi-baarisyadayada gaarka ah ee la soo bandhigay laga bilaabo Noofambar 4-12, 2021 (N=2,519), ku dhawaad ​​26% jawaab bixiyaasha ma aysan bilaabin wax soo iibsigooda fasaxa horraantii Noofambar ee sanadkan marka loo eego 22% sanadkii hore. Guud ahaan, macaamiishu waxay soo sheegaan in ku dhawaad ​​7% ay ka yar yihiin wax soo iibsigooda fasaxa sanadkan marka loo eego isla dhibicdii sanadkii hore. "Kani waxa uu macaamiisha u ahaa sannad dhib badan, dhib badan. Wax iibsiga oo dib u dhaca, oo ay weheliso macaamiil dhaqaale ahaan caafimaad qaba, ayaa kor u qaaday rabitaanka ah in loo dabaaldego fasax caadi ah, iyo arrimo kale waxay horseedi doonaan baahida sare ee 5½ toddobaad ee soo socda, "ayuu yidhi Richard Vitaro, Agaasimaha Maamulka, Creo Advisors. Intaa waxaa dheer, sahankeennu wuxuu muujinayaa doorbidyada warbaahinta dhijitaalka ah iyo kuwa dhaqameed ee gaarka ah, kuwaas oo loo adeegsan karo si loo gaaro macaamiisha marxaladdan xilliga.
Caqabadaha Silsiladda Sahayda iyo Dalabka Qabashada Fursadaha
Walaaca sii kordhaya ee ku saabsan silsiladda sahayda caalamiga ah ayaa sii kordheysa marka aan bilowno inaan dareemno saameynta badeecadaha fasaxa ee dib u dhaca ee warshadaha. Marka loo eego sahankeennu, alaab-la'aanta alaabtu waxay keenaysaa ku dhawaad ​​7% beddelka iibka fasaxan, taas oo ay heli doonaan kuwa tafaariiqda leh ee leh boosaska adag ee kaydka ama waxay ku hagi karaan dukaamaysiga beddelka la aqbali karo. Waxaan filaynaa inay jiri doonaan wax ka badan $60 B dakhliga ay qabtaan kuwa leh qoondaynta alaabada xooggan, iyadoo tafaariiqleyaasha kale ay u badan tahay inay la kulmaan alaabooyin bararsan fasaxa ka dambeeya maadaama kaydku sii socdo. Steve Vielmetti, Agaasimaha Maamulka ee Creo Advisors, ayaa sheegay in, "Tafaariiqlayaasha iyo soosaarayaasha kuwaas oo halis dheeraad ah u galay dhismayaal horumarsan ama leh silsilado sahay ah oo badan si ay ugu hagaan macaamilka beddelka la aqbali karo ama ka falcelinta degdegga ah ee dib u habeynta amarada ama saamiyada, ayaa ku guuleysan doona xilli ciyaareedkan. ” Steve wuxuu ku daray, "In fasaxa ka dambeeya, shirkaduhu waa inay u dhaqaaqaan dhinaca 'silsilad sahayda casriga ah' oo ay ku qeexan yihiin la-hawlgalayaasha iyo hantida si habboon loo meeleeyay, oo ay weheliso qaadashada qalabyada qorshaynta horumarsan ee ka faa'iideysanaya xogta sida weydiimaha shabakadda, dhaqdhaqaaqa, iyo calaamadaha kale ee dibadda si loo wado. fulinta waqtiga dhabta ah iyo dardargelinta."
Khibrada wax iibsiga
Sahankayaga ayaa muujinaya in in ka badan 85% macaamiishu ay qorshaynayaan inay galaan dukaamada qayb ka mid ah safarkooda wax iibsiga ee fasaxan, laakiin waxay aad uga walaacsan yihiin waayo-aragnimada. Intaa waxaa dheer, deegaanka bakhaarku wuxuu noqday mid aad u adag muddo ka dib iyadoo leh BOPIS, Curbside, borotokoolka Covid, iyo arrimo kale oo badan.
Ku guuleysiga Xiliga
Iyadoo go'aamo badan oo hore loo sameeyay, ganacsatadu waxay weli haystaan ​​fursad ay ku keenaan natiijooyinka ~ 75% ee ka haray iibka fasaxa. Hagaajinta algorithms-yada dhijitaalka ah, dhigista xayaysiis dhaqameedka, wadista ka qaybgalka macaamilka iyo daacadnimada, hubinta shaqada dukaanka oo ku filan, iyo meelaynta agabka la heli karo si istiraatijiyad ahaan waxay gacan ka geysan doontaa in la wado natiijooyin xoogan oo sare iyo hoose ah xilli ciyaareedkan. Tallaabooyinka noocan oo kale ah waxaa awood u leh hoggaan hufan, iskudubarid urur, karti, iyo falanqayn. Marka la eego isku darka baahida macaamiisha ee xooggan iyo agabka baahsan iyo caqabadaha shaqaaleysiinta, tafaariiqleyda si wanaagsan u fuliya fasaxan waxay heli doonaan abaalmarino waaweyn. Intaa waxaa dheer, awoodaha tafaariiqleyaasha la geeyo inta lagu jiro fasaxan waxay dhisi doonaan xoog urureed, taas oo ay ka faa'iidaysan karaan ilaa 2022 iyo wixii ka dambeeya.